Iràna: Hanome Fitsaboana Tsy Manavaka Ho An’ireo Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2015 12:27 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, বাংলা, Español, Swahili, Dansk, English
Ao anaty fanambaràna iray avy amin'ny Iraky ny Firenena Mikambana ao Iràna, dia ho ampidirin'ny governemanta Iraniàna ho ao anatin'ny Rafitra Fiantohana Salamat any aminy ireo rehetra voasoratra ho mpitsoa-ponenana any aminy. Io dia fiarahana miasa eo amin'ny Ministeran'ny Atitany, mpiadidy ny raharahan'ireo mpitsoa-ponenana, ny Fikambanana Iraniana misahana ny fiahiana Ara-Pahasalamana ary n y Kaomisiona Ambony ao amin'ny Firenena Mikambana miadidy ny Mpitsoa-ponenana (UNHCR). Ikendrena indrindra ireo vahoaka Afgàna sy Irakiàna mpitsoa-ponenana ao Iràna izy io.
Ny Tehran Times, gazety mpiseho isanandro amin'ny fiteny Anglisy, ampahany amin'ny Masoivohom-baovao Mehr an'ny Fikambanana Fanapariahana ny Fotokevitra Islamika, no namaritra ilay “fisitrahana maimaim-poana” ho an'ny Sivanka Dhanapala, izay Solontenan'ny UNHCR ao Iràna ho an'ilay fandaharanasa:
Araka ny tranonkalan'ny UNHCR, Iràna no firenena iray eto amin'izao tontolo izao “mampiantrano vahoaka mpitsoa-ponenana betsaka indrindra sy naharitra indrindra.” Manakaiky ny 1 tapitrisa ireo vahoaka Afgàna mpitsoa-ponenana ao Iràna, miampy ireo vinavinaina ho 1,4 hatramin'ny 2 tapitrisa monina sy miasa ao amin'ny firenena nefa tsy misoratra ara-dalàna ho mpitsoa-ponenana.
Niharan'ny kiana tany aloha tany ny fomba niatrehan'i Iràna io olana fanisàna vahoaka io, kanefa, tena hita misongadina tao anatin'ny tatitry ny Human Rights Watch tamin'ny 2013, izay nanome antsipirihany ny fitondra tsizarizary sy indraindray fanararaotana an'ireo Afgàna nataon'ny governemanta sy ny fiarahamonina Iraniàna.
Notsikeraina hatrany i Iràna noho ny tsy nandraisany ireo mpitsoa-ponenana Siriana avy amin'ny ady an-trano tany aminy. Io fanakianana io dia tonga ao anatin'ny hoe ny zava-misy dia tafiditra lalina amin'ny fifandonana ao Siria izy, toy ny tafika mpiaradia no sady mpanohana ihany koa ny Filoha Siriana Bashar Al-Assad.